ဟောင်ကောင်ရဲ့မင်္ဂလာချိုင့်၌မြင်းပြိုင်ပွဲများ၏ ins နှင့်တနေရာ
ဟောင်ကောင်ရှိမြင်းပြိုင် ပို. တပ်မက်ရုံအကြောင်းကိုဘယ်နေရာမှာမဆိုအခြားကမ္ဘာပေါ်မှာထက်နောက်တော်သို့လိုက်သည်။ ဟောင်ကောင်ရဲ့မင်္ဂလာချိုင့်နဲ့တူအပွေးပွိုငျလမျးမှန်မှန်မရှိသလောက်အင်္ဂလန်, ပြင်သစ်, သို့မဟုတ်အမေရိကန်မှာရှိတဲ့တခြားအပွေးပွိုငျလမျးပျေါတှငျပုံတူကူးယူကြောင်းတစ်ခု Electrify လေထုဝါကြွားခြင်းတို့သည်ဒိုင်းဖို့ထုပ်ပိုးထားသည်။ စိတ်အားထက်သန်လောင်းကစားဝိုင်းနှင့်အတူကအားလုံးကိုချဆေးကြောဖို့ဘီယာစိတ်အားထက်သန်ပေးနေသောနှင့်ပဒေသာမျှော်လင့်ထား။
အားလုံးရိုးသားမှုခုနှစ်, မြင်းနှင့်အတူဟောင်ကောင်ရဲ့စွဲလောင်းကစားဝိုင်းတွေနဲ့ပိုပြီးတစ်ခုစွဲဖြစ်ပါသည်, သို့သော်ကမ္ဘာ့အကောင်းဆုံးပုဒ်အချို့ကိုကမ္ဘာ့အဆင့်မီပြိုင်ပွဲနှင့်တွေ့ဆုံပြီး Manic လူအစုအဝေးနှင့်အတူလမ်းကြောင်းမှတစ်ဦးအလည်အပတ်သင်အလောင်းအစားသို့မဟုတ်မလိုသောရှိမရှိတစ်ဦးမဖြစ်မနေဖြစ်ပါသည် ။
အင်္ဂလိပ်မှာသန့်စင်ပြီးလေထုရန်အသုံးပြုကြသည်သူများသည်တွေ့ဆုံသို့မဟုတ်အမေရိကန်ပုဒ်ပေါ်သမ္မာသတိရှိကြလော့ပတ်ဝန်းကျင်ကတော့ဟောက်ဟောင်ကောင်လူအစုအဝေးနှင့်နှိမ့်ချချဉ်းကပ်မှုစနစ်တခုစိတ်လှုပ်ရှားဖွယ်ထိတ်လန့်ရှာတွေ့ပါလိမ့်မယ်။ အဆိုပါလမ်းကြောင်းမိုးမျှော်တိုက်ညဥ့်လူမျိုးကာလအတွင်းကနီယွန်အလင်းရောင်ပေးခြင်းနှင့်ပြန်လမ်းကြောင်းမှပေါ်ဆူညံသံဘုရားရဲ့၏ဘဏ်အားဖြင့်တန်းဖြစ်၏ဖြစ်ပါတယ်။ မင်္ဂလာချိုင့်ကိုရိုးရှင်းစွာကမ္ဘာ့အကြီးမြတ်ဆုံးအားကစားမျက်မှန်တစ်ခုဖြစ်သည်။
ဘေးဖယ်သည့်လောင်းကစားဝိုင်းနှင့်ပြိုင်ကားကနေမင်္ဂလာချိုင့်အလွန်လူမှုရေးကိစ္စဖြစ်ပါတယ်။ ဘီယာရွက်ဖျင်တဲများနှင့်ယာယီပူ-ခွေးတိုက်ကျွေးခြင်းနှင့်ရေလောင်း 40,000 လူတွေကိုစောင့်ရှောက်ရပ်လျက်, အပွေးပွိုငျလမျးတာမြို့တော်ရဲ့အကြီးမားဆုံး Al-နံရံဆေးရေးပန်းချီကားများဘားသို့လှည့်။ ဒါဟာအစစျေးပေါင် - အတွက်တရားစွဲဆိုသည့်မတန်တဆစျေးနှုန်းများထက်ဝေးစျေးနှုန်းချိုသာ Lan Kwai Fong သည် ဘီယာတစ်စက်သည်။
မင်္ဂလာချိုင့်များ၏ပိုင်ရှင်များအဆိုပါဟောင်ကောင်ဂျော်ကီကလပ်ဖြစ်ကြသည်။ သူတို့ဟာနေဆဲ, နယ်မြေထဲမှာကိုလိုနီလက်ထက် မှစ. တစ် holdover ပြိုင်ကားများနှင့်လောင်းကစားအပေါ်တစ်ဦးလက်ဝါးကြီးအုပ်ကိုင်လျက်, HKJC အဆိုပါနယ်မြေများအကြီးဆုံးအခွန်ထမ်းများနှင့်မေတ္တာဖြစ်ပါတယ်။
အဆိုပါအဖွဲ့အစည်းများအခွင့်ထူးခံအဆင့်အတန်းကိုနီးပါးတိုင်းဟောင်ကောင် resident.You ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဟောင်ကောင်လောင်းကစားလမ်းညွှန်နှင့်အတူကမ်းလှမ်းမှုအပေါ်အများကြီးကစားနည်းတွေကိုဘယ်လို navigate လုပ်ထွက်ရှာတှေ့နိုငျများအတွက် flutter အဓိပ္ပာယ်ချင်းစီအစည်းအဝေးအပေါ်ထားရှိပျမ်းမျှခြောက်ဦးသန်းပေါင်းကစားနည်းမှကျေးဇူးတင်စကားဖြစ်ပါတယ်။
မင်္ဂလာချိုင့်ပြိုင်ကားကွင်း vs Sha တင်
မင်္ဂလာချိုင့်ဦးခေါင်းနှင့်ပခုံးအခြားအပွေးပွိုငျလမျး (အထက်ဖြစ်ပါတယ် Sha တင် ဟောင်ကောင်ရှိ) ။
မင်္ဂလာချိုင့်မှာလမ်းကြောင်းမိုးမျှော်တိုက်၏မြို့ရိုးနားမှာ banked နှင့်ညအချိန်တွင်သတ်မှတ်ထားအားလုံးနီးပါးအစည်းအဝေးများနှင့်အတူအဆောက်အဦ၏ဤလူအစုအဝေးညနေပိုင်းတွင်ရဲ့စိတ်လှုပ်ရှားမှုအဘို့အနီယွန်၏ပြိုးပြိုးပြက်ပြက်ခြံစည်းရိုးဖြစ်ပေါ်လာသော။ မင်္ဂလာချိုင့်ကိုလည်းမြို့အတွင်းစျေးအသက်သာဆုံးဘီယာများနှင့်ဒေသခံများ, ကျွမ်းကျင်သူများနှင့်ခရီးသွားဧည့်တစ်ဦး convivial ရောနှောအချို့နှင့်အတူစားသောက်ဆိုင်များ, အရက်ဆိုင်, ပေးထားပါတယ်။ မြေပေါ်မှာ entry ရုံဟောင်ကောင် $ 10 ဖြစ်ပါတယ်။
ဘယ်အချိန်မှာ Go မှ
ဟောင်ကောင်ပြိုင်ကားရာသီဇွန်လမှစက်တင်ဘာလကနေနဲ့ညီမျှတယ်။ ပြိုင်ပွဲအစည်းအဝေးများ Sha တင်အတွက်မင်္ဂလာချိုင့်နှင့်စနေနေ့နေ့လည်ဗုဒ္ဓဟူးနေ့ညနေပိုင်းအပေါ်ယေဘုယျအားဖြင့်ဖြစ်ကြသည်။ သငျသညျလမ်းပိတ်ပစ်အများပြည်သူသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးလူတို့နှင့်အတူနီးပါးလူမှုအဖွဲ့ကြောင်းဆိုလိုတာအဖြစ်အားကစားကွင်းမှဦးရန်လိုအပ်ပါလိမ့်မယ်။ ဗဟို - - ဝမ်ချိုင်မင်္ဂလာချိုင့်ပြိုင်ကားကွင်းကိုရောက်ရှိဖို့အကောင်းဆုံးနည်းလမ်းတစ်ခုဘယ်နေရာမှာမဆို Sheung ဝမ်ကနေအပေါ် hopped နိုင်သည့်ဟောင်ကောင်လမ်းရထားပေါ်တွင်ဖြစ်ပါသည်။
လူမျိုးအပေါ်နိမ့်ဆုံးလောင်းကြေးတစ် bargain $ 10 ဖြစ်ပြီး, အားလုံးနောက်ထပ်ကစားနည်းဤငွေပမာဏရဲ့မြှောက်လဒ်၌ရှိကြ၏။ သင်ကလမ်းကြောင်းမှာအခမဲ့ထုတ်ပေးထားသောလောင်းကစားနှင့်ပုံစံကိုလမ်းပြရှာတွေ့ပါလိမ့်မယ်။ သင်တစ်ဦးလောင်းနိုင်သည့်အခါတိုင်းရင်းသားများအကြားတဆယ်မိနစ်ဝန်းကျင်များသောအားဖြင့်ရှိပါတယ်။ သင်တစ်ဦးချင်းစီတဦးချင်းအလောင်းအစား၏စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းတွေကရှင်းပြသည်လိုအပ်လျှင်သင်ကူညီနိုင်သူအင်္ဂလိပ်စကားပြောန်ထမ်းများရှာတွေ့ပါလိမ့်မယ်။
Times Square Mall ကဟောင်ကောင်
ဟောင်ကောင် Disneyland vs သမုဒ္ဒရာပန်းခြံ
ဆန်းစစ်ခြင်း: မက္ကဆီကိုရဲ့ Riviera Nayarit အပေါ် Iberostar Playa Mita
Puglia အတွက် Go မှထိပ်တန်းနေရာများ
မဟတ္တမဂန္ဒီ, ခေတ်သစ်အိန္ဒိယအဘခမည်းတော်၏ဘဝအကြောင်း 20 အချက်အလက်
သင်ကလာအိုနိုင်ငံကြိုးစားပါဖို့လို9ဟင်း
အနောက်မြောက်အတွက် Fantastic မိုးလုံလေလုံရေပန်းခြံ
ဂရန်း Canyon အအနောက်နိုင်ငံများနှင့် Skywalk သွားရောက်လည်ပတ်
Little ကကျောက်ထရံ, AR အတွက်မွေးနေ့ပါတီထောက်ပံ့ကုန်
အန်သိုနီ Bourdain လိုပဲ San Jose Exploring
ကယ်လီဖိုးနီးယား Theme ပန်းခြံနှင့်အပန်းဖြေပန်းခြံ
Gloucester, MA အတွက်လုပ်ဖို့9အကောင်းဆုံးအရာ
သင်ဟာအမြဲလိုအပ်ပါလိမ့်မယ်ယင်းသာလျှင် Spa Pack များစာရင်း